लु चल्यो : गरिखानेको बिचल्ली - नेपाल समय
लु चल्यो : गरिखानेको बिचल्ली
भैरहवा- उखरमाउलो गर्मीले प्रदेश ५ को तराई क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीका विभिन्न भूगोलमा यतिबेला लु चलिरहेको छ। भित्री मधेसका रूपमा रहेको दाङ उपत्यकामा पनि असाध्यै गर्मी छ।
मौसम विभागको रेकर्डले पनि नेपालको सबैभन्दा बढी गर्मी नेपालगन्ज भैरहवा क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ। शनिबार भैरहवामा ५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी गर्मी भएको बताइएको छ।
मौसम विभागको वेबसाइटमा शनिबार भैरहवाको तापमान ४३.३ डिग्री सेल्सियस रहेको उल्लेख छ। यसअघिको तथ्यांक केलाउँदा भैरहवामा २०६९ असार १ मा अधिकतम तापक्रम ४३.८ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड गरिएको थियो। त्यसैगरी २०५५ जेठ २७ गतेका दिन सर्वाधिक बढी तापक्रम मापन भएको थियो। उक्त दिन भैरहवाको तापमान ४४.८ डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। २०२९ साल असार १० गते भैरहवाको न्यूनतम तापमान १३ डिग्री सेल्सियस मापन थियो। जुन सबैभन्दा कम तापक्रम हो।
विभागका अनुसार शनिबार नेपालगन्जको तापक्रम ४३ डिग्री सेल्सियस र दाङको तापक्रम ३९.३९ डिग्री सेल्सियस छ।
खुला आकाशमुनि काम गरेर छाकको जोहो गर्नेहरु यतिबेला आकुलव्याकुल छन्। भैरहवाको बुद्धचोकमा उखुको रस बेच्ने शिवकुमार यादवको व्यापार घटेको छ। सधैं डेढ सय गिलाससम्म उखुको रस बेच्ने गरेका उनको शनिबार २७ गिलास र आइतबार ७ गिलास बिक्री भएको थियो। उनले भने, ‘अरू बेला मान्छेको ओहोरदोहर पनि भइरहन्थ्यो। बाटो हिँड्ने यसो रोकिएर जुस खान्थे। तर खै अहिले त फिटिक्कै मान्छे हिँड्या छैन। व्यापार त डामाडोल नै भयो।’
रिक्सा चलाउँदै आएका आसराम यादवलाई ३ दिनदेखि रिक्साको भाडा तिर्न मुस्किल भएको छ। उनले भने, ‘दैनिक १ सय ३० रुपैयाँ साहुंलाई भाडा दिनुपर्दछ। बिहानदेखि अहिलेसम्म एकजना यात्रु पाएको छैन। धेरै गाह्रो भयो।’
भैरहवा आँखा अस्पतालअगाडि भेटिएका गणेश यादव आसरामका साथी हुन्। सात वर्षदेखि रिक्सा चलाउँदै आएका उनले पनि तातो हावाको कारण रिक्सा चलाउन गाह्रो भएको बताए। उनले भने, ‘यस्तो हावा चल्या छ, रिक्सा पेल्नै सकिन्न। अनि कसरी कमाइ हुन्छ ? यति साह्रो गर्मी त कहिल्यै भएको थिएन।’
खुला आकाशमुनि जुत्ता सिलाएर दैनिक गुजारा चलाउने दीपचन्द हरिजनले व्यापार नै नभएको बताए। बर्मेलीटोलमा रुखको छहारीमुनि ग्राहक कुरेर बसेका उनले भने, ‘के गर्नु सर ? कोही आएको छैन। हिजो पनि दिनभर बसियो। आज पनि अहिलेसम्म एक जना मान्छे आएको छैन। यस्तै हो भने त भोकै पारेर मार्छ कि क्या हो ?’
दुम्किबासदेखि केरा बेच्न आएकी मीरा चौधरी झन् गर्मीबाट आक्रान्त छिन्। डोकाभर केरा लिएर घरघरमा पुगेर बेचिरहेकी उनलाई छिटो बिक्री नभए सडेर जाने डरले सताएको छ। उनले भनिन्, ‘पहिलो त यो घाममा हिँड्न सकिएको छैन। दोस्रो आधा सडिसक्यो। रेट पनि घट्यो। सावाँ नै डुब्ने भयो।’
विहार राज्यका अमृत केवट एक वर्षदेखि भैरहवामा कवाड संकलन गर्दै आएका छन्। उनलाई गर्मीको कारण एक किलो पनि कवाड संकलन गर्न नसक्दा साँझ के खाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। साइकलमा ३५ किलोमिटर हिँड्दा पनि केही संकलन नभएको बताए। उनले भने, ‘सबै टोल सुनसान छ। मान्छे घरबाट निस्किएकै छैन।’
गरिखाने वर्ग यतिबेला अचाक्ली गर्मीको चपेटामा परेको छ। आइसक्रिम, खरभुजा, तरभुजाको व्यापार पनि हुन छाडेको छ। खरभुजा व्यापारी असलम अलीका अनुसार गर्मी धेरै हुँदा मान्छेहरु घरबाहिर निस्कन छाडेपछि सबै व्यपार ठप्प भएको हो।
अचाक्ली बढेको गर्मीले हिँडडुल गर्न नै समस्या भएको दीपक रायमाझीले बताए। डेढ दशकदेखि टयाक्सी व्यवसाय गर्दै आएका उनले सडकमा मान्छे नै देखिन छाडेको बताए। उनले भने, ‘तीन दिनदेखि मान्छे देखिन छाडेको छ। साँझबिहान अलिअलि देखिन्छ। नत्र पैदल हिँडेको मान्छे नै देखिन्न।’
मनसुन सुरु नहुँदा तापक्रम अत्यधिक बढ्न गएको हो। करिब साढे ४३ डिग्री तापक्रमका कारण भैरहवा क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित भएको छ। मौसमी प्रतिकुलताले दैनिक जीवन शैली र क्रियाकलाप प्रभावित छन्। गर्मीका कारण वृद्धा र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा गर्मीका कारण बिरामीको चाप बढेको छ।
विश्वव्यापी रुपमै देखिएको जलवायु परितवर्ननको प्रत्यक्ष असरस्वरुप असार महिनामा पनि पानी नपरेर चैतवैशाखको खडेरीझैं भइरहेको छ। मौसमी प्रतिकुलताले मान्छे मात्र नभई गाईवस्तु र पशुपन्छीलाई समेत असर गरेको छ।
बारम्बार अघोषित लोडसेडिङले झनै समस्या गरेको गोकुल पोखरेलले बताए। स्थानीय युनिभर्सल स्कुलका एमडी पोखरेलले भने, ‘एकातिर गर्मी अर्कोतिर अघोषित लोडसेडिङ। सास फेर्न ग्राहो भएको छ।’
आइतबार बिहानै भैरहवा बसपार्क नजिकैको पार्कमा सुतिरहेका रामबेलास तेली घरमा हावा उकुमुकुुस हुँदा आएका रहेछन्। एक छोरा र श्रीमतीसहित सुतिरहेका उनले भने, ‘के गर्नु हजुर ? दिनभर रिक्सा चलायो। रातिकोठामा जाँदा लाइन जान्छ। अनि सास फेर्न नि ग्राहो हुन्छ। त्यसैले हामी त हप्ता दिनदखि खाना खाइवरी यतै आएर सुत्छौं। कमसे कम यहाँ हावा त चल्छ। ’
स्वास्थ्य समस्या र बच्ने उपाय
गर्मीका कारण शरीरमा घमौरा आउन र झाडापखाला लाग्न सक्छ। त्यसैले गर्मी मौसममा सकेसम्म घरबाहिर निस्कन नहुने चिकित्सक बताउँछन्। निस्किहाल्नुपरेमा पातलो कपडा शरीर छोपिने गरी लगाउने र छिनछिनमा पानी पिउने र प्याज खाने गर्नुपर्दछ। गर्मी समयमा फुड प्वाइजनिङ हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।
भैरहवाको भीम अस्पताल, कपिलवस्तुको तौलिहवा अस्पताल, परासीको पृथ्वीचन्द अस्पताल, बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल मात्रै नभएर मेडिकल कलेज र अन्य निजी अस्पतालमा पनि विरामीको चाप बढेर गएको छ।
भीम अस्पतालमा चिकित्सकलाई भ्याइ नभ्याइ भएको इमरजेन्सी शाखाका अहेब गोपाल उपाध्यायले बताए। उनले भने, ‘ इमरजेन्सीमा अन्यबेला ४०÷४५ जना बिरामी आउँथें। केही दिनयता त्यो संख्या तेब्बर भएको छ। हिजो मात्रै सबा सयभन्दा बढी बिरामी आएका छन्।’
उपाध्यायका अनुसार झाडाबान्ता, जरो, चक्कर लाग्ने, जलवियोजनका बिरामी इमरजेन्सीमा धेरै आउने गरेका छन्। उनका अनुसार शनिबार ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं ३ हाटिफर्साटिकरका सञ्जय कहांरको परिवारका ७ जना झाडापखला लागेर अस्पताल आएका थिए। उनीहरु सबैको अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार भइरहेको छ। चिकित्सकका अनुसार उनीहरुले ठुटिपीपिलबाट मासु लगेर पकाएर खाई सुतेका थिए। राति सबै परिवारलाई झाडापखला लागेपछि अस्पताल आएका हुन्।
बालबालिकालाई गर्मीले सताएपछि विद्यालय बन्द गर्न थालिएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सूचना निकालेर एक साताका लागि बन्द गर्न परिपत्र गरेको छ। यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि विद्यालय बन्द गरेको छ।